Home Wararka Antonio Guterres oo kusii jeedda Xeryaha ay ku sugan yihiin Rohingya
Antonio Guterres oo kusii jeedda Xeryaha ay ku sugan yihiin Rohingya
Antonio Guterres Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa ku sugan dalka Bangladesh si uu u arko dhibaatada haysata kumannaanka qof ee qaxootiga Rohingya.
Waxa uu booqan doonaa qoysaska qaxootiga ah ee ku nool xerooyiinka si ay beesha caalamka wax badan uga qabato dhibaatooyiinkooda.
Mr Guterres ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu booqdo dalka Myanmar oo ah halka ay ka soo qaxeen qaxootigan Rohingya.
Waxa uu xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay sheegay in xukuumadda Myanmar uu ku cadaadin doono in ay fahanto masuuliyada ka saaran dadka laga tirada badan yahay ee Rohingya.
Gobolkaasi Rakhine waxaa ka qaxay dad ay tiradooda gaarayso 700,000 oo qof oo ah Muslimiinat Rohingya.
Qaramada midoobay ayaa horey u sheegtay in xaaladda gobolka Rakhine aysan ammaan ahayn oo aysan qaxootoga ku laaban Karin.
Previous articleEthopia oo Markale la wareegtay Qalbi Dhagax+Sababta
Next articleFarmaajo oo ka codsaday beesha uu ka dhashay Qalbi-Dhagax in ay ku qanciyaan in uu aqbalo magdhow dowlada Soomaaliya siiso
Contact us: muqd[email protected]